Ivon-tsera aman-kolo di… – Jobily 10 ho marihina mandritra ny 2013 - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Ivon-tsera aman-kolo di… – Jobily 10 ho marihina mandritra ny 2013
Isany homarihina ny faha-100 taona nahaterahan’i Dox
«Ny lasa tsy fanadino»… «Adidy ny mitadidy». Ireo no lohahevitra entin’ny Ivon-tsera aman-kolo Di, etsy amin’ny lapan’ny Akademia Tsimbazaza hanamarihana karazana jobily 10 mandritra ity taona 2013 ity, na ny « Jobily fitsiahy 2013 » izay nosokafana omaly.
Tafiditra ao anatin’izany ny tsingerin-taona faha-100 nahaterahana olomanga telo eo amin’ny tontolon’ny asa soratra: Jean Verdi Salomon Razakandraina na i Dox (13 janoary), Rajaobelina Prosper (19 febroary) ary Régis Rajemisa Raolison (08 mey).
Toy izany koa ny faha-100 taona niketrahan’ny VVS (Vy, Vato Sakelika), ny FFPM (Fikambanan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara) ary ny Haiteny merina nadikan’i Jean Paulhan.
Ny fanamarihana andiany fahatelo kosa dia ny faha-20 taona nipoiran’ny Andron’ny teny Malagasy sy ny Foiben’ny akademia momba ny teny ary ny Tsipiteny filamatra.
Ireo Jobily rehetra ireo anefa dia miara-dia hatrany amin’ny faha-190 taona (26 marsa 1823) nahaterahan’ny Soratra Malagasy ofisialy.
Fetin’ny Reny – Hamaky sehatra eto Antananarivo i Barinjaka sy Nina’s(0)
Mpanakanto roa samy ho avin’ny mozika mafana. Taorian’ireo seho takariva samihafa, hamaky sehatra eto Antananarivo i Barinjaka sy Nina’s, ao anatin’ilay fampisehoana «Fetin’ny reny goavam-be», izay hotanterahina ny alahady tolakandro izao, etsy amin’ ny kianjan’ny Complexe scolaire Ampefiloha. Sambany izy mianadahy ireto, araka izany, no hiatrika seho an-kalamanjana. Hibahan-toerana ao anatin’ity seho ity, araka izany, ny gadona avy any amin’ny faritra atsimon’ ny Nosy satria raha nahafantarana
Rakikira fah-8 – Hanolotra maimaim-poana ny «Maha-domelina» i Samoëla(0)
Mpanakanto fantatra eo amin’ ny tontolon’ny vazo miteny. Miainga any indray ny rakikira fahavalo novokarin’i Samoëla ary hatolony maimaim-poana ireo mpankafy ny «Maha- domelina». Mandritra ny seho izay hotanterahina, amin’ny sabotsy izao, etsy amin’ny kianja malalaky ny Esca Antanimena no hitondrany an-tsehatra ireo hira 10 voarakitra ao anatiny. «Lohahevitra no entinay ao anatin’ny rakikira vaovao
« Découverte RFI 2012″ – Hanolotra seho tokana eto Madagasikara i Elmotho(0)
Tafiditra ao anatin’ny fitetezana firenena maro. Hanolotra seho tokana eto amintsika i Elmotho, mpanakanto avy any Namibie, izay nandrombaka ny loka tamin’ny fifaninanana «Découvertes Rfi-France 24», tamin’ny 2012. Efa hatramin’ny ela no nitondra ny zava-kantony ivelan’ny firenena niaviany i Elmotho ary ny nahazoany io loka io dia efa sehatra iray hitondrany ny zavakanto ho an’i Afrika, izay voaresany matetika ao anatin’ny
« Herinandron’ny kolontsaina » – Voaporofo ny fahasamihafana isam-paritra sy ny firenena(0)
Tafiditra tao anatin’ ilay hetsika, «Herinandro ho an’ny kolontsaina». Nankalazaina omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny kolontsaina maro lafy. Nankalazaina tamin’ny alalan’ny seho sy fampirantiana samihafa tetsy amin’ny La City, Ankorondrano io andro io, ka nanehoana ny fahasamihafana eo amin’ ireo kolontsain’ny faritra eto Madagasikara an-daniny ary ny fahasamihafana avy amin’ireo firenen-tsamihafa an-kilany. Nasehon’ireo tranoheva maromaro ny mampiavaka ny kolontsaina isam-paritra eto Madagasikara, ka nisongadina tamin’izany ireo fomba fitafy sy ny taovolo isaky ny faritra na isaky ny foko. Masoivoho vahiny maromaro ihany koa
FISARIHANA Finday avo lenta no ho azon’izay tsara vintana mandritra ny fisarihana hotanterahin’ny banky Bni, mandritra ny foara iraisam-pirenena tanterahina, etsy amin’ny Parc des expositions Forello Tanjombato, ny alakamisy 23 ka hatramin’ny alahady 26 mey ho avy izao. Ny alahady hariva amin’ny 4 ora sy sasany no hanaovana ny fisarihana ka ireo telo voalohany tsara vintana no hahazo amin’izany.
Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 10:00	FIARAHAMONINA